Madaxweyne Farmaajo soo dhawow – Bosaso Times News
Madaxweyne Farmaajo soo dhawow
admin February 8, 2017 Madaxweyne Farmaajo soo dhawow2017-02-08T17:38:01+00:00 Puntland, somali News No Comment
Waxaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo kaas oo helay codadka xildhibaanada 184 cod halka madaxweynihii hore Xasan Shiikh Maxamuud helay 97 cod oo keliya, Shiikh Shariif Sh. Axmedna helay ilaa 46 cod.
Waxaa mudan in la ogaado in dadka badankiis ee Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogan ay rabeen in madaxweynaha dalka loo doorto Mudane Farmaajo taas oo runtii ah arin muhiim ah lana oran karo xildhibaanada cusubi waxay ka tarjumeen rabitaanka shacabka Soomaaliyeed.
Kadib doorashadii Farjaamo waxaa suuqyada magaalada Boosaaso iyo shaaracyada is qabsaday tamashaad iyo dabaal deg balaaran oo ay dhigayaan dhamaan shacabka Boosaaso rag iyo dumar, caruur iyo waayeel, ciidamadu waxay ridayeen xabado ay ku taageerayaan doorashada Farmaajo.
Hadaba waxaan leenahay bahda Bosasotimes.com soo dhow mudane madaxweyne. Waxaa lagaaga fadhiyaa inaad ficil u bedesho balamahaagii aadna iska ilaaliso inaan shacabka Soomaaliyeed ku hungoobin malahooda iyo rabitaanka ay ku rabeen inaad madaxweyne u noqoto.
Waxaan sugnaa waa hadba sida aad u qaabisho caqabadaha kala duwan ee dalka ka jira waxaana ku leenahay nasiib wanaagsan iyo in Alle kugu guuleeyo kuuna fududeeyo waajibaadka balaaran ee ku sugaya.
http://www.bosasotimes.com/madaxweyne-farmaajo-soo-dhawow/http://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/02/farmaajo.jpghttp://www.bosasotimes.com/wp-content/uploads/2017/02/farmaajo-150x150.jpg 2017-02-08T17:38:01+00:00 adminPuntlandsomali NewsBosaso,Bosasotimes.com,FarjaamoWaxaa maanta lagu doortay magaalada Muqdisho madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo kaas oo helay codadka xildhibaanada 184 cod halka madaxweynihii hore Xasan Shiikh Maxamuud helay 97 cod oo keliya, Shiikh Shariif Sh. Axmedna helay ilaa 46 cod. Waxaa mudan in la ogaado in dadka badankiis ee Soomaaliyeed...admin siyaadyusuf@hotmail.comAdministratorBosaso Times News
Bosaso, Bosasotimes.com, Farjaamo
« Madaxwaynaha puntland oo safarkiisi uu ku marayay gobolada bari iyo karkaar oo uu soo gabagabeeyay
Khataraha Wadooyinka Magaalooyinka Puntland »